Imirhumo yeApple Podcasts iqala ngoJuni 15 | Ndisuka mac
Imirhumo yeApple Podcasts iqala nge-15 kaJuni
UToni Cortes | 10/06/2021 10:00 | Izaziso
"Hlawula ngombono ngamnye" uza kwii-podcast. UApple usandula ukubhengeza ukuba nge-15 kaJuni izakuvula "inkonzo" entsha Imirhumo yeApple Podcasts. Njengoko igama layo libonisa, ukusukela ngala mhla, abadali bePodcast baya kuba nakho ukuhlawulisa ngokuthe ngqo abasebenzisi ukukhuphela umxholo wabo.
UApple ubeka nje iqonga. Ukusuka apho, iya kuba iipodcasters ezo ziya kunyanzelisa ukuba zifuna ukuba umxholo wazo uhlawulwe okanye hayi, kwaye umsebenzisi uya kuba nenkululeko yokukhetha ukuba kufanelekile ukubhalisela ijelo elithile le-podcast okanye hayi. Umthetho worhwebo olukhululekileyo.
esengozini upapashe nje ukuba iApple namhlanje ithumele i-imeyile kubadali beepodcast abacebisa ukuba 15 ngoJuni Iqonga lokubhaliselwa kweApple Podcasts ngoku liza kusebenza. Ukusukela ngala mhla, ubhaliso lwakho lwepodcast luya kusebenza.
Ekuqaleni, eli qonga bekufanele ukuba liyasebenza ngoMeyi, kodwa iApple kuye kwafuneka ilibazise ukumiliselwa ngenxa yeengxaki zobuchwephesha. Inkampani ikwathembise izongezo ezongezelelweyo kwiApple Podcasts usetyenziso emva kwemicimbi eyahlukeneyo emva kokumiliselwa kwe iOS 14.5 ngo-Epreli.
Iqonga lemirhumo ye-Apple Podcasts labhengezwa okokuqala kumsitho okhethekileyo ka-Apple ngo-Epreli 20. Le nkonzo intsha iya kuvumela abenzi beepodcasters ukuba banikele Imirhumo ehlawulwayo kwimiboniso yakho enomxholo webhonasi, njengeziqendu ezingenazintengiso kunye neziqendu zababhalisi kuphela, umzekelo.
Nangona abasebenzisi kufuneka bekrobe iipokotho zethu, (ukuba sifuna njalo), ngokuqinisekileyo iyindlela yokuphakamisa umgangatho womxholo esinokuwufumana Apple Podcasts. Ngoku umceli mngeni ungowokudala umxholo. Kuya kufuneka 'basithengisele' imveliso yeaudiyo enomtsalane ngokwaneleyo ukuba siyirhumele. Siza kubona ukuba konke oku kungena njani kwintengiso yeaudio eshukumayo ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Imirhumo yeApple Podcasts iqala nge-15 kaJuni
Kwakhona, ngoJuni 21 lusuku lweYoga lwaMazwe ngaMazwe kwaye ungaphumelela imbasa ye-Apple Watch
Ukunqongophala kweMini-LED kubonise ukumiliselwa kwe-14 "kunye ne-16" ye-MacBook Pros